Ku noolaanshaha Heerka 3 | Living at Level 3 | Unite against COVID-19
Heerka Digniinta 3 waa inaad:
U jirso 2 mitir dadka kale dibada guriga.
iyo 1 mitir goobbaha shaqada.
Dhaq gacmahaaga oo qalaji gacmahaaga si caadi ah.
Haddii aad jiran tahay, joog guriga. Ha shaqo tegin ama ha tegin dugsiga. Dadka la kulmin.
Haddii laguu sheegay inaad is go’doomiso waa inaad sharci ahaan isla markaaba sidaas sameeysaa.
Haddii aad iska baadho COVID-19, waa inaad sharci ahaan joogtaa guriga oo aad iskarantiil ilaa aad hesho natiijooyinkaaga.
Isku imaanshaha ilaa 10 qof way sii socon karaa, laakiin keliya adeegyada arooska, geerida aaska ah iyo xaflada baroor diiqda ah. Kala fogaanshaha jidhka iyo tallaabooyinka caafimaadka dad waynaha sharci ahaan waa in la ilaaliyaa.
Heerka Digniinta 3, sharci ahaan waa inaad la joogtaa gudaha dadka qoyskaaga mar kasta oo aanad joogin xaga shaqada ama dugsiga. Waxaad tan u balaadhin kartaa:
inaad ku xidho qoyska dhow iyo qoyska balaadhan
inaa dkeento daryeelayaasha, ama
taageerto dadka la karantiilo.
Waa muhiim inaad ilaaliso dadka aad wada kulantaan. Gaar ka dhigo dadka aad la kulanto oo kaliya ku dar dadka halka ay badbaado iyo caafimaad qab ku ilaalin karto adiga iyo iyaga.
Xaga Digniinta Heerka 3, daboolada wejiga sharci ahaan waa in la xidhaa:
Waxbarashadda xaga Heerka Digniinta 3
Xarumaha Waxbarshadda Hore, dugsiyada xanaanada iyo dugsiyada kala sareeya waxay u furan yihiin carruurta shaqaalaha lama huraanka ah oo keliya. Waa u badbaado carruurtan inay dugsiga joogaan.
Ukala dhex safarka gobolada
Heerka Digniinta 3 u kala dhex safarka gobolada si xoogan ayaa loo xayiray.
Safarka gaarka ah ee lagu tegato ama lagaga baxayo aaga Digniinta 3 si adag ayay u xadidan tahay. Tani waxaa lagu caawinayaa joojinta faafida fayraska. Waxaad u baahan kartaa oggolaansho dheeraad ah inaad raadsato si aad u dhammaystirto safarka dhammaan aagaga Heerka Digniinta.
Dhismayaasha dad waynaha
Dhismayaasha dad waynahu sharci ahaan waa inay xidhaan. Kuwan waxaa ka mid ah makatabaddaha, sinimooyada, goobaha cuntada, jiimka, berkadaha, garoomada iyo suuqyada.
Hadda waa wakhtiga la qaadanayo dhowr hawleed oo xusub, ama naftaada aad gaadhsiinayso ama dadka kugu xeeran khatar kasta. Waxaad samayn kartaa hawlaha fal celinta khatarta yar gudaha aagaaga maxaliga ah.
Heerka Digniinta 3, waxaa jira xayiraado lagu badbaadinayo shaqaalaha, lagu xadido is dhegalka macaamiisha oo caawisa ka hortagga faafida COVID-19. Waxaanu ku talinaynaa shaqaalahu inay ka soo shaqeeyaanguiriga hadidi ay karaa.
Ku Jira xaaladd degdeg ah
Adeegyada lama huraanka ah ee ay ku jiraan adeegyada caafimaadka, adeegyada gurmadka, adeegyada guriga iyo badeecada gaadiidka way sii shaqayn doonaan doonaan. Loo shaqeeyayaasha iyo qaybahan waa inay sii wadaan inay buuxiyaan dhammaan waajibaadyada caafimaadka iyo badbaadada. Haddii uu jiro gurmad (tusaale, dab, dhul gariid, sunaami iwm.) raac nidaamyada gurmadka caadiga ah. Shuruudaha gurmadku waxay tirtiraan shuruudaha nidaamka Digniinta COVID-19, laakiin halka ay suuragal tahay kala fogaanshaha jidhka waa in la ilaaliyaa.